Xiaomi Redmi 9A Carbon Gray (4GB/128GB) ~ ICT.com.mm
HomeXiaomi Redmi 9A Carbon Gray (4GB/128GB)
Xiaomi Redmi 9A Carbon Gray (4GB/128GB)
Display: 6.53inches Resolution: 720×1600 CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Chipset: MediaTek Helio G25 (12 nm) Memory: 4GB(RAM) Internal Storage: 128GB (ROM) Rear Camera: 13MP Front Camera: 5MP SIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual... [Learn more]
Brand: XiaomiSKU: 189378N/ASee more: Mobile Phones, New Arrivals, Products, XiaomiFilter by: EDIT-ONE, outofstock, Smartphones
Redmi 9A က ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Xiaomi ရဲ့ ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းသစ် တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ကတ်ထိုး စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အတွင်းမှန်အတွက် IPS LCD capacitive touchscreen အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား 6.53” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Resolution အားဖြင့် 720 x 1600 pixels (~269 ppi density) ရရှိမှာ ဖြစ်လို့ ကြည်လင်တဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ OS အဖြစ် Android 10 ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုနိုင်ဖို့ MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset နဲ့အတူ Octa-core 2.0 GHz Processor ကို တွဲဖက်ပေးထားပြီး ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် PowerVR GE8320 (GPU) ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Internal Storage – 128GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး SD ကတ်ပေါက်ပါဝင်တဲ့အတွက် Storage ထပ်မြှင့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ RAM 4GB ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန် Facebook, Viber တို့လို App တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး Family Game လေးတွေကို ကစားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ကျောကင်မရာအဖြစ် 13MP (wide) ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး AI ပါဝင်တဲ့အတွက် လှပတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာ 5MP (wide) Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပြီး Selfie Timer နဲ့ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက် 5000mAh ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ဘတ္ထရီပါဝါအတော်လေး ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လှပသေသပ်တဲ့ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး မီးခိုးရောင်ကာလာနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
The battery hasacharge cycle count as high as 1000, meaning that the phone can be used daily for more than 2.5 years without any notable degradation to the battery. Battery longevity increased by 25% compared to the market standard
Take group selfies easily by using the Palm Shutter. Simply show your palm to the camera to start the selfie timer
Unlock inaflash with AI face unlock! Your phone will recognize your face and unlock in an instant